” နွေရောက်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဦးထုပ်တွေလှူဒါန်းနိူင်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေတဲ့ အလှမယ်ဟန်လေး” – Cele Snap
” နွေရောက်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဦးထုပ်တွေလှူဒါန်းနိူင်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေတဲ့ အလှမယ်ဟန်လေး”
ပရိသတ်ကြီးရေဟန်လေးကတော့လှပကျော့ရှင်းတဲ့ အလှကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီး Miss Universe myanmar ရဲ့အလှမယ်ဟောင်းတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပြီးအမြဲပွင့်လင်းဖော်​ရွေသူလေးပါ။အလှမယ်မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်ပေမယ့် အချက်အပြုတ်ရေးရာမှာလည်းကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်တဲ့အပြင် မိသားစုကိုလည်းထောက်ပံ့​နိုင်တဲ့ အရမ်းကိုတော်တဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်ပါပဲနော်။
ယောကျာ်းလေးပရိသတ်တွေ အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသူလေးတစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပြီး MTV များစွာလည်း ရိုက်ကူးထားတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။Music Videoတွေအပြင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲတွေပါရိုက်ကူးနေတဲ့ အလှမယ်လေးဖြစ်ပြီး အမြဲပေါ့ပေါ့ပါးပါးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်ကာ တိရိစ္ဆာန်လေးတွေကိုလည်း ချစ်တတ်သူလေးပါနော်။
အမြဲတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကအလှူလေးတွေပြုလုပ်လျက်ရှိတဲ့ ဟန်လေးကတော့ ” လျှာ ဦးထုပ်တွေကို လက်ကားများများဝယ် လို့ရမဲ့နေရာလေးတစ်ချက်လောက် ?? ( အလှူ လုပ်ဖို့ပါ )မိုးတွင်းဆို မိုးကာလှူတယ် ( နွေဆို ဦးထုပ်လှူမှာ မို့ ) 🥳”ဆိုတဲ့ စာလေးနဲ့ သူမပရိသတ်တွေကိုအကူအညီတောင်းခံလာခဲ့တာပါ။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Source: Nan Shwe Aye
ပရိသတျကွီးရဟေနျလေးကတော့လှပကြော့ရှငျးတဲ့ အလှကိုပိုငျဆိုငျထားပွီး Miss Universe myanmar ရဲ့အလှမယျဟောငျးတဈဦးလညျးဖွဈပွီးအမွဲပှငျ့လငျးဖျော​ရှသေူလေးပါ။အလှမယျမငျးသမီးတဈလကျဖွဈပမေယျ့ အခကျြအပွုတျရေးရာမှာလညျးကြှမျးကငျြပိုငျနိုငျတဲ့အပွငျ မိသားစုကိုလညျးထောကျပံ့​နိုငျတဲ့ အရမျးကိုတျောတဲ့ မငျးသမီးတဈလကျပါပဲနျော။
ယောကျြားလေးပရိသတျတှေ အခိုငျအမာရရှိထားတဲ့ ရှမျးတိုငျးရငျးသူလေးတဈဦးပဲ ဖွဈပွီး MTV မြားစှာလညျး ရိုကျကူးထားတဲ့ သူတဈယောကျပါ။Music Videoတှအေပွငျ ရုပျရှငျဇာတျလမျးတှဲတှပေါရိုကျကူးနတေဲ့ အလှမယျလေးဖွဈပွီး အမွဲပေါ့ပေါ့ပါးပါးပြျောပြျောရှငျရှငျနတေတျကာ တိရိစ်ဆာနျလေးတှကေိုလညျး ခဈြတတျသူလေးပါနျော။
အမွဲတတျနိုငျတဲ့ဘကျကအလှူလေးတှပွေုလုပျလကျြရှိတဲ့ ဟနျလေးကတော့ ” လြှာ ဦးထုပျတှကေို လကျကားမြားမြားဝယျ လို့ရမဲ့နရောလေးတဈခကျြလောကျ ?? ( အလှူ လုပျဖို့ပါ )မိုးတှငျးဆို မိုးကာလှူတယျ ( နှဆေို ဦးထုပျလှူမှာ မို့ ) 🥳”ဆိုတဲ့ စာလေးနဲ့ သူမပရိသတျတှကေိုအကူအညီတောငျးခံလာခဲ့တာပါ။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။
ဒီနေ့မှာကျရောက်တဲ့ (၂၉) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အတွက် ပြင်င်ဦးလွင်ထိလိုက်လာပြီး စပရိုက်လုပ်သွားတဲ့ သူမရဲ့မန်နေဂျာကြောင့်ကြည်နူးမဆုံးဖြစ်နေတဲ့ နေခြည်ဦးရဲ့ ဗီဒီယိုလေး
သူမစားချင်တာကို မောင်လေးသျှင်းမြတ်ကစိတ်ရှည်ရှည်လုပ်ကျွေးနေတဲ့အတွက် ချစ်မဝဖြစ်နေတဲ့ မေမြင့်မိုရ်